Yubaraj Khatiwada — Bhaktapurpost.com
गृहपृष्ठ # Yubaraj Khatiwada
बैंक लहड र घमण्डले चल्दैन, मौका छ सुध्रनुस् : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केहि व्यक्तिहरु लहड र घमण्डले बैंकिङ व्यवसायमा लागेको भन्दै उनीहरुलाई सुध्रनका लागि बिग मर्जर उपयुक्त अवसर भएको बताएका छन्। शुक्रबार जनता बैंक र ग्लोबल आईएमइ बैंकको मर्जरपछि संयुक्त कारोबार सुभारम्भ कार्यक्रममा...बाँकी
bank Yubaraj Khatiwada
सहुलियत ब्याजमा ऋण नपाए ईमेल गर्नुहोस : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा
Posted by Mbudho | अर्थ-बिजनेस
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनुदानको प्रक्रिया पूरा गरेर पनि सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध नभएमा इमेलद्वारा जानकारी दिन अनुरोध गरेका छन् । सहुलियत ब्याज दरको ऋण उपलब्ध गराउन आयोजित सम्झौता कार्यक्रममा उनले सम्झौता गरिएका बैंकहरुबाट राष्ट्रिय...बाँकी